घरैमा उपलब्ध केही कुरा जसले गर्दा रक्सी र चुरोट छुटाउन सकिन्छ - ज्ञानविज्ञान
रक्सी र चुरोटको नशा छुटाउन दिनदिनै अदुवाको टुक्रा लिएर बिस्तारै चपाइरहनुस् । केही दिन यसो गरिरहँदा लत छुट्छ । अदुवाको पेस्टमा एक चम्चा चिनी हालेर खाँदा पनि हुन्छ ।
जव नसाको तलतल लाग्छ तव चुइगम चपाउने गर्दा पनि धेरै हद सम्म नशा बाट बच्न सकिन्छ
दूध पिउने बानी बसाल्दा पनि नशा छुटाउन सकिन्छ । दूधबाहेक दही, पनीर र लस्सीको सेवन गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
चुरोट पिउने नशा लागेका मानिसले दिनभरि बेस्सरी पानी पिइरहनुपर्छ । यसो गर्दा पेट डम्म भइरहन्छ र चुरोट पिउन मन लाग्दैन ।
बेसार खाँदा शरीरलाई धेरैथरी फाइदा हुन्छ । रक्सीको नशा छुटाउन तरकारीमा अलि बढी बेसार प्रयोग गर्नुस् । अनि दूधमा बेसार हालेर पिउनुभए पनि हुन्छ ।
चुरोटको तलतल लाग्यो कि दालचिनीका टुक्राहरू सुँघ्नुस् । यसको कडा सुगन्धले निकोटिनको इच्छा पूरा गरिदिन्छ । अनि दालचिनी चपाउँदा पनि राम्रो हुन्छ ।
मदिरा संसारभर धेरै जसोले खाने गर्छन् । हाम्रो समाजमा पनि यसको प्रयोग आधुनिकताको नाममा होस् या अन्य बाहनाहरु नै किन नहोस्, बिस्तारै बढ्दै गएको कुरामा कुनै दुईमत छैन । के हामीले सुरक्षित तवर ले ठिक मात्रामा मदिरा खाएका छौ ?
विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार मदिराको ठिक मात्राले मुटुको धमनीको रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यस्तै जीवनको आयु लम्ब्याउँन, रुघाखोकीबाट बच्न, मृगौलाको पथ्थरीबाट बच्न पनि सहयोगी हुने कुरा देखाएका छन् । तर मदिरा अन्य रोगका लागि भने घातक हुन सक्छ ।
अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार कस्तो रक्सी पियो भन्दा पनि कसरि र कति मात्रामा रक्सी पियो त्यसका आधारमा जोखिम हुने बताएको छ । हरेक खाध्य तथा पेय पदार्थहरु खान जान्यौ भने अमृत समान हुन्छन् भने तिनै कुरा खानु नजान्दा बिष भैदिन्छन् ।
त्यसो भए मदिरा कसरि र कति मात्रामा खाने ?
मदिरा अर्थात अल्कोहल सेवनगर्नु भन्दा एक घण्टा अगाडि केहि न केहि कुरा खानु पर्दछ । जसले गर्दा तपाईको पेट तयारी अवस्थामा बस्न सक्नेछ र क्षति हुनबाट बच्नेछ । मदिरासँग धेरै कार्बोहाईड्रेड युक्त खाना खानु उपयुक्त हुदैन । प्रोटिन र चिल्लो जन्य तथा फलफूल खानु पर्दछ । जसको कारणले तपाईले खाएको अल्कोहल बिस्तारै शरीरले लिन्छ र यसको असर पनि बिस्तारै तपाईमा देखा पर्दछ ।
अल्कोहल एउटा अम्लिय पिय पदार्थ हो । त्यसैले योसँग प्रोटिनजन्य र केहि फलफुल लिन सकिन्छ । त्यस्तै अल्कोहल सेवन गर्दा प्रसस्त मात्रामा पानी खानु पर्दछ, जसले ह्याङओभर हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्छ ।
बरफका केहि टुक्रा अल्कोहलमा राखेर खादा अझ बढी राम्रो हुन्छ । चकलेट, धेरै मसला राखिएको, नुनको प्रयोग अत्याधिक गरिएको तथा क्याफिन युक्त खानालाई अल्कोहलसँग खानु राम्रो मानिदैन । त्यस्तै चिसो पेय पदार्थ र सोडासँग मदिरा सेवन गर्नु पनि राम्रो मानिदैन ।
अल्कोहल कति मात्रामा सेवन गर्न सकिन्छ ?
अल्कोहल कति मात्रामा सेवन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैको एक मत भने छैन ।
युकेको अल्कोहल अध्ययन संस्थाका अनुसार एकदिनमा एक वयस्क पुरुषले ३ युनिट र महिलाले १ देखि २ युनिट खादा फाईदा गर्ने जनाएको छ । अल्कोहल हप्ताको पाँच दिन खाने र दुई दिन नखादा राम्रो हुन्छ । एक हप्तामा वयस्क पुरुषले १५ देखि १८ युनिट र महिलाले ८ देखि १२ युनिट सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
एक युनिट अल्कोहल भनेको १० एमएल वा ८ ग्राम शुद्द ईथानोल हो । एक सय एमएल वाइनमा १ युनिट हुन्छ । ३० एमएल हाड्र ड्रिक्समा एक युनिट हुन्छ । त्यस्तै २०० एमएल बियरमा एक युनिट हुन्छ । अल्कोहल प्रतिशतलाई जम्मा अल्कोहलले गुणान गरि हजारले भाग गर्दा जम्मा युनिट निस्कन्छ ।
जस्तै – ५.२% एभिपि भएको कुनै अल्कोहल को बोतलमा ५६८ एमएल अल्कोहल छ भने यी दुईलाई गुणान गरी हजारले भाग गर्दा निस्कने अंक २.९५ उक्त बोतलमा भएको जम्मा युनिट हो ।
हामीले पिउने रक्सीको सिसीमा जति प्रतिशत प्रुफ भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यसको ठीक आधा अल्कोहल र बाँकी पानी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जस्तै भोड्कामा ७० प्रतिशत प्रुफ लेख्नुको अर्थ त्यसमा ३५ प्रतिशत अल्कोहल छ भन्ने हो ।
लोएला युनिभर्सिटि का प्राध्यापक डाक्टर एडवार्ड नेअस्फ़ेका अनुसार “अल्कोहल सेवन कहिल्यै नगरेका व्यक्तिलाई सेवन गर्नुस् भनेर सुझाब दिन सकिदैन तर मध्यम अल्कोहल – साच्चिकै मध्यम मात्रामा सेवन गर्नु फाईदाजनक छ” ।
मदिरा खाँदा शरीरमा कुनैपनि किसिमको रोग नभएको हुनुपर्छ । मुटुको धड्कन बढ्ने, मुटु सुन्निएको अबस्था, कलेजोको समस्या भएको, दीर्घरोग लागेको र डाक्टरले बन्देज गरेको व्यक्तिले मदिरा सेवन गर्नु हुदैन । अल्कोहल धेरै खादाँ मुटुको धड्कन बढ्ने, उच्च रग्ताचाप हुने, मस्तिस्कघात हुने र बेहोस तथा मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ ।
हालसालै रटगर्स युनिभर्सिटि अमेरिकाले गरेको अनुसन्धानले अल्कोहल धेरै मात्रामा सेवन गर्दा डिएनएमा क्षति पुग्ने र त्यसले तपाइको ब्रेनले काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरिदिने निष्कर्ष निकालेको छ । जसले गर्दा जति धेरै रक्सि सेवन गर्यो उति धेरै नै सेवन गर्न मन लाग्छ, जुन खराब कुरा हो ।
माथिको लेख हामीले मदिराजन्य पदार्थको वडावाका लागि लेखिएका होइन । तथ्यांक हेर्ने हो भने मदिराले ल्याएको भयावह अवस्था देख्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक १० सेकेन्डमा एक जना र प्रत्येक वर्ष ३३ लाख (३.३ मिलियन) मानिसले अत्यधिक मदिरा सेवनको कारण अकालमा ज्यान गुमाउने गर्छन् । यो विश्वको वार्षिक मृत्युको ५ दशमलब ९ प्रतिशत हो ।
विश्वमा लाग्ने रोगमध्ये ५ दशमलब १ प्रतिशत रोग मदिराको कारण लाग्ने गर्छ । २० देखि ३९ वर्ष उमेर समुहका २५ प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु अत्यधिक मदिरा सेवनको कारण हुने गरेेको अनुसन्धान बताउँछ । एक बर्षमा नियमित रक्सी सेवन गर्ने पुरुषले औसत २१.२ लिटर र महिलाले औषत ८.९ लिटर शुद्ध रक्सी प्रयोग गर्छन् ।
रुसका पुरुषहरुले औषत ३२ लिटर शुद्ध रक्सी प्रयोग गर्ने गरेको सन २०१० को विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक अध्ययनले देखाएको छ ।
मानिसले जति अव्यवस्थित र नियमित मदिराको सेवन गर्दै जान्छ, त्यति नै मस्तिष्कमा पनि नकरात्मक असर पर्दै जान्छ । रगतमा रहेको मदिराको मात्राअनुसार मस्तिष्कमा असर पर्ने गर्छ ।
अत्याधिक मदिरा सेवनले मानिसमा मानसिक विचलन, चोटपटक र विचार आदान प्रदान गर्न नसक्ने जस्ता समस्या ल्याउने गर्छ ।
लत भएको व्यक्तिलाई छुटाउदा शुरुमा आत्तिने, तनाव महसुस गर्ने, छटपटिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक प्रतिक्रिया देखिने गर्छ । अत्याधिक पसिनो आउने पनि गर्छ ।
Don't Miss it कलेजो स्वस्थ राख्ने उपाय के हुन् ? जान्नुहोस
Up Next चिनी दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छाै जसबारे केहि कुरा यस्ता छन्